China Mass Production AR fiber fiber chopped strands factory na ndị na-ebu ya | Yuniu
Mass Production AR glass fiber chopped strands
Glass fiber carbon eriri maka faiba glaasi mmanya
100 gsm / 160gsm faiba glaasi ntupu
Okpomọkụ na-eguzogide Glass eriri kpara Roving na elu qu ...
Faiba glaasi Emulsion e iko iko eriri ute 450
1200Tex 2400Tex faiba glaasi Direct roving Site China
Faiba glaasi ejegharị faiba glaasi Yarn
Faiba glaasi onwe-nrapado teepu
Mass Production 110g 18x14mesh ntupu windo maka ọnụ ụzọ
Mass Production AR glass fiber chopped strands bụ ihe dị mkpa enwere ike iji mee ihe na Glassfibre Reinforced Concrete (GRC), ọ bụ 100% inorganic material, ọ dịkwa mma ngbanwe nke nchara na asbestos na mpaghara simenti ebuputara.
AR Faiba glaasi / Glass Fiber Chopped bụ nke a haziri ahaziri maka GRC (nke a na-eme ka iko glassfiber) nke ọma gbasasịa na usoro mmegharị (ngwakọta ntụ ntụ ma ọ bụ ngwakọta mmiri) maka ịkpụzi akụkụ n'ime GRC.
Ihe Dayameta (um) Chopped Ogologo (mm) At Kwekọrọ n'Ozizi Resin
AR Faiba glaasi nke nwere eriri 10-13 12 Na elu
AR Faiba glaasi nke nwere eriri 10-13 24 Na elu
1.Modest mmiri ọdịnaya.Good flowability, ọbụna nkesa na okokụre ngwaahịa.
2.Quickly mgbochi mmiri, elu n'ibu ike nke okokụre products.Best na-eri arụmọrụ.
3.Good bundling: hụ na ngwaahịa anaghị efu na bọl na n'ụzọ.
4. Ezigbo dispersibility: ezigbo mgbasa na-eme ka eriri ndị ahụ gbasasịa mgbe agwakọtara ya na ciment ciment.
5. Ezigbo anụ ahụ na chemical Njirimara: ọ nwere ike budata melite ike nke ngwaahịa simenti.
1. Mmetụta nke mgbape nnabata na mmụba nke iko eriri mesikwuru fluorine ihe. Melite mgbochi seepage arụmọrụ nke ihe. Mma ntu oyi arụmọrụ nke ihe. Melite iguzogide na ike nke ihe. Melite anwụ ngwa ngwa nke ihe.
2. Glass fiber na-esonye akara ciment, osisi gypsum, nchara iko, ihe ndị mejupụtara, ngwa eletriki na ngwaahịa ndị ọzọ na-ewu ụlọ, nke nwere ike ịme ka ọ dịkwuo ike, mgbochi mgbape, iyi mgbochi na ike.
3. Igwe iko ahụ na-esonye n'ọdọ mmiri ahụ, mbadamba ụlọ ahụ, ebe a na-egwu mmiri, ọdọ mmiri nrụrụ aka, ọdọ mmiri na-ekpofu mmiri nwere ike imeziwanye ọrụ ha.
AR Glass Fiber Chopped Strand na-akwakọba na akpa kraft ma ọ bụ akpa akpa, ihe dị ka 25kg kwa akpa, akpa 4 kwa akwa, akwa 8 maka pallet na akpa 32 maka pallet, akpa 32 nke ngwaahịa na-ejupụta site na multilayer shrink film na mbukota band. Ọzọkwa ngwaahịa nwere ike juru n'ọnụ dị ka ndị ahịa 'ezi uche chọrọ.
Nzipu nkọwa: 15 ụbọchị mgbe na-anata ego.
Q1.Do ị na-akwụ ụgwọ maka ebu? Ego ole ka ọ bụ? Enwere ike iweghachite ya? Kedu ka esi eweghachi ya?
Enweghị ụgwọ maka ịgba akaebe
Q2.What asambodo gị ụlọ ọrụ gafere?
Q3.Which ahịa gị ụlọ ọrụ gafere factory nnyocha?
Q4.Ogologo oge ole ka oge nnyefe gị na-ewe?
Ngwaahịa na-emekarị 7-15 ụbọchị, ngwaahịa ahaziri 15-20 ụbọchị
Q5.Des gị ngwaahịa nwere a kacha nta iji ibu? Ọ bụrụ otu ahụ, kedụ opekata mpe ihe ole?
Ọ dịghị ot ngwaahịa, ahaziri ngwaahịa 1 ton
Q6.What bụ gị mkpokọta ikike?
500000 tọn / afọ
Q7.Olee nnukwu ụlọ ọrụ gị? Kedu uru mmepụta kwa afọ?
Ndị mmadụ 200, ụlọ ọrụ ụlọ abụọ na otu alaka Thailand
Nke gara aga: 100 gsm / 160gsm faiba glaasi ntupu
Osote: Glass fiber carbon eriri maka faiba glaasi mmanya